Akụkọ - Achọrọ M Mmanụ Milega Dị Elu?
Tingka nká bụ akụkụ nke ndụ. Ka afọ na-aga, akụkụ ndị na-eme anyị akọrọ anaghị arụ ọrụ nke ọma dị ka ha mere na mbụ. Cars bụ otú ahụ. Ha na-agbada, ụgbọ ala ndị toro ogologo nwere kilomita ka elu chọrọ ntakịrị mmụba iji mee ka ihe na-aga nke ọma. Nke ahụ bụ ebe mmanụ dị elu na-abata!
Dịka ị nwere ike ịme ihe iji nwee ahụ ike n'oge na-adịghị anya, ịnwere ike inye mmanụ ụgbọ ala gị dị elu iji nyere aka igbochi iyi na akwa metụtara afọ. Mana olee otu isi mara mgbe oge eruola ịmalite iji ya? Maka ụgbọ ala nwere kilomita 75,000 ma ọ bụ karịa, oge nwere ike ịbụ ugbu a.
Ya mere, ihe kpọmkwem bụ elu agbara mmanụ?
Dị ka aha ya pụtara, a na-ahazi ụdị mmanụ a iji dozie nsogbu ndị ụgbọ ala dị elu na-enweta, ma ọ bụ ndị nwere ihe karịrị kilomita 75,000. O nwere ike inye aka belata oriri mmanụ, anwụrụ ọkụ, na anwụrụ si na injin ochie. Mmanụ agbara dị elu na-arụkwa ọrụ iji belata nkwụsị mmiri na olulu mmanụ.
Ọ bụ ezie na ịnwere ike iji mmanụ dị elu na ụgbọ ala na-eto eto na-enweghị emerụ ya ahụ, nsogbu ndị adreesị mmanụ dị elu anaghị apụtakarị n'ụgbọ ala na-erughị 75,000 kilomita.
Olee otú elu agbara mmanụ ọrụ?
Mmanụ dị elu na-arụ ọrụ dị ka multivitamin dị ike, na-eweghachi akụkụ injin ya na igbochi ịla n'iyi na akwa.
Dị ka akara conditioners n'ime nnukwu agbara mmanụ ịgbasa na rejuvenate akàrà, obere mmanụ seep si gị engine. Nke a na - ebute na mmanụ erughị ala, nke pụtara na obere mgbanwe mmanụ na obere nsogbu injin na ụzọ.
Mmanụ ndị dị elu nwere ọtụtụ antioxidants, ihe nhicha ahụ, na ihe mgbakwunye iji belata nkụda na esemokwu - ihe niile bara uru maka injin gafere oge ha. Ihe ndị a na-ehichapụ unyi na sludge nke na - ewuli elu oge, ma na - ebelata esemokwu ka injin gị wee dị ka nwamba.
Ònye kwesịrị elu agbara mmanụ?
Arsgbọ ala nwere ihe karịrị 75,000 na odometer ha nwere ike irite uru na mmanụ dị elu. Vehiclesgbọ ala ochie ndị nwere kilomita ole ma ole nwekwara ike irite uru, ebe ọ bụ na akàrà nke injin nwere ike ịgbapụ oge na-aga n'agbanyeghị agbanyeghị kilomita. Mebiri emebi akàrà pụtara na-eri mmanụ, na ihi eri mmanụ pụtara na injin gị anaghị arụ ọrụ nke kachasị mma.
Nwere ike ịgbanwe gaa mmanụ dị elu ma ọ bụrụ:
§ Ị ndabere ala ụgbọ ala gị nke na-arụzi ụgbọala ma na-achọta mmanụ stains n'ala ebe ụgbọ ala gị na-dọwara. Mmanụ manụ pụrụ igosipụta ịtọghe akụkụ injin ya.
§ na-ele anya n'okpuru mkpuchi ya ma hụ streaks mmanụ n'akụkụ akụkụ injin ya dị ala.
§ Injin gị na-ada ụda karịa ka o kwesịrị. A mkpọtụ mkpọtụ nwere ike na-egosi na gị na engine nwere ike irite uru site denser moto mmanụ, ie, elu agbara mmanụ.
Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ichebe ụgbọ gị maka ogologo oge, jigide ọrụ nlekọta ndozi oge niile, ọkachasị mgbanwe mmanụ na mmanụ dị elu.
Kedu ka injin m si erite uru na mmanụ dị elu?
High agbara mmanụ adreesị adịghị ike ụfọdụ gị engine na-metụtara agadi. Ọ dị ka mmanụ ude na-agwọ ọrịa maka akụkụ injinị ukwuu.
Consumption Mbelata mmanụ oriri: vehiclesgbọ ala ndị na-agba ezigbo mmanụ na-amịkpọ mmanụ ma na-erepịa mmanụ karịa obere ụgbọala ndị na-akatabeghị ahụ́ n'ihi akàrà injin ya. Nnukwu mmanụ dị na mmanụ na-eme ka akàrà akarịla ala, nke na-eduga n'ibelata mmanụ na ike nsure ọkụ.
Obere ihe na-ejupụta njin: Injin ochie na-agbakọtakọta slude nke mmanụ moto ndị ọzọ hapụrụ. Nnukwu kilomita agbara na-agbaji ma kpochapụ sludge fọduru.
Nchebe site na mmebi: vehiclesgbọ ndị njem dị elu na-enwekarị nsogbu na akwa akwa karịa akwa ụgbọala. Ihe mgbakwunye na mmanụ dị elu na-echekwa ma chekwaa injin gị niile.
Adị m njikere maka ngbanwe mmanụ m dị elu!
N'agbanyeghị ole (ma ọ bụ ole na ole) kilomita ị nwere n'ụgbọala gị, mgbanwe mmanụ a na-ahazi mgbe niile dị oke mkpa iji mee ka ụgbọ ala gị na-agba ọhụrụ, karịa. Mgbe ị gafere maka mgbanwe mmanụ gị ọzọ na Firestone Complete Auto Care dị nso, jụọ onye ọrụ gị banyere mgbanwe mgbanwe mmanụ dị elu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị hụla ntụpọ mmanụ na draịva gị ma ọ bụ nụ ka igwe na-adọ. Highgbanwe mmanụ dị ogologo nwere ike inyere ụgbọ ala gị aka iru nnukwu ihe dị ya nso!
Akara Nkebi, Silicone Rubber Akara, Auto ngwa, Mmanu mmanu, Akụkụ mapụtara, Control Ogwe aka Bushing,